Fanahy Kalifornia - Ny ora mampalahelo ahy - Countdown ho an'ny fanjakana
Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tany anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divine Mercure voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranony dia nanomboka nitomany ny menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha nisy ny hazo fijaliana sy sarivongan'i St. Pio blun. mihantona ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy mitonona anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta. Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny
feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Saint-Michael Michael Arkanjely ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy “Tsy hitsahatra hiresaka aminao izao aho, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao.”Nahatsiaro ny fiantsoan'izy mivady ny hanomboka ny fahitana ny Fikambanan'ireo Mpikambana an'i Marian izay handinihany ny hafatry ny Our Lady to	Fr. Stefano Gobbi	. Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga, ” ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Lady-ntsika	Fr. Stefano Gobbi	, "Ho an'ireo pretra malalantsika zanakay." Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.
Tamin'ny 11 aprily 2020, ity fanahy tany Kalifornia ity dia nahazo ny isa 477 avy amin'ny Blue Book:
Ny ora amin'ny alahelo lehibe
Anaka malala, mitoera eto amiko ankehitriny, ilay Reninao feno alahelo, izay niteraka anao teo ambanin'ny hazo fijaliana, izay nahafatesan'i Jesosy Zanako ho famonjena anao. Izaho no Renin'ny alahelo. Ampidiro anio ao amin'ny misterin'ny lao lao aho, mba hahafantaranao ny fomba ampiasako ny maha-reny ara-panahy sy manerantany ahy mihoatra noho ny rehetra amin'ny fitiavana sy ny alahelo: Fitiavana anareo rehetra, anaka; alahelo noho ny alahelonao, noho ny loza mahatsiravina atahorana anao, noho ny fijaliana maro amin'izao fotoan-tsarotra farany izao. Noho izany antony izany, ny andro amin'ny alàlan'ny mpamosavy dia velona koa ianao ora amin'ny alaheloko lehibe.
Io no ora hisaoran'ny Eglizy ahy, Zanako malalako. Mampalahelo tokoa ny mijaly amin'ny Fiangonana amin'izao fotoana izao, rehefa mitondra ny hazo fijaliany lehibe izy ary miakatra ao amin'ny Kalvary feno rà mandriaka ny làlany sy ny famonoan-drà! Mbola tsy nisy toy izany androany, toy ny androany, ny Fiangonana natao tahaka an'i Jesosy Zanako. Mitovy Aminy Izy ao amin'ny irery sy ny fanariana; dia toa Azy amin'ny fandavana sy ny famadihana; dia toa Azy amin'ny fanamavoana sy ny fanamelohana izy; mitovitovy amin'ny hazofijaliana sy ny fanaintainany izy. Ity no ora hisaorana ahy ho an'ny Fiangonana, satria tonga ny ora fankasitrahany hanavotra azy.
Izao no fotoana hisaorako ny zanak'olombelona, narary loatra ary nihena be tamin'ny fanandevozana nataon'ny fanahy ratsy. Ny hery miiba manjaka dia manjaka ny tany ary mamokatra eny rehetra eny ny vokatry ny fitondrany maizina. Ary noho izany ny maha-olombelona dia lasa mpanompo sampy indray, taorian'ny efa ho roa arivo taona nanavotana azy sy ny fanambarana voalohany ny Filazantsaran'ny famonjena. Manarona azy ny tsy finoana sy ny tsy fahatokisana; manota ny fahotana; ny poizina mandoto azy; ny fireharehana no mifehy azy; manala azy io ny fahadiovana; ny egoisma sy ny fankahalana dia manintona azy; Satana dia mampihena izany hatrany hatrany amin'ny fanandevozana ary manjaka aminao amin'ny heriny miharihary. Izao no ora alaheloko lehibe ho an'ity olombelona mahantra rehetra ity, eo ambany fifehezan'ny fanahy ratsy, satria tonga ny ora hamaizan'ny famaizana azy.
Io no fotoana tena mampalahelo ahy, anaka. Mafy tokoa ny mavesatra amin'ny fijalianao mandritra ireo andro ireo! Amin'ny masoko feno ranomaso dia mijery ireo ankizy kely izay notarihin'ny saina ho amin'ny traikefa amin'ny faharatsiana sy ny ota; amin'ny tanora izay voatazona sy namadika tamin'ny fiarahamonina izay misy azy, ny tanora izay omena lanja diso, ary tonga iharan'ny fahalotoana sy zava-mahadomelina izy ireo ankehitriny; ao amin'ny fianakaviana izay nanjary nizara sy nanimba; amin'ny mahantra izay sahirana noana; tamin'ireo izay nampijaliana sy novonoin'ny ady; any amin'ny marary izay nolavina ny fikarakarana sy fanampiana; eo am-pialana, mitokana ny tsy manana ahiahy; amin'izay ao anatin'ny alahelo sy izay maty. Amin'ny maha-Renim-pianakaviana ahy, eo an-danin'ireo tsirairay sy mitoloko eo ambanin'ny lanjan'ny hazofijaliana izy ireo. Tsy manary anao mihitsy aho; Miaraka aminao ambonin'izay rehetra ilaina indrindra aho.
Izany no ora hisaako anareo rehetra, anaka, fa tonga ny fotoan'ny fahorianao lehibe. Mialà amiko. Mandehana haingana any amin'ny fiarovana azo antoka amin'ny foko tsy mahafaty, satria tsy maintsy miara-miaina isika, amin'ny ora fitsapana lehibe indrindra, izay tonga ankehitriny, ho anao ho an'ny Fiangonana sy ho an'ny olombelona rehetra. —Ny vadintsika ho an'i Fr. Stefano Gobbi, nomena tany Sant'Omero (Teramo) tamin'ny 15,1992 tamin'ny volana septambra, tamin'ny fetin'ny vadin'ny alahelo.
Ireo sary farany vao haingana ny sarivongan'ny Our Lady of Fatima ao an-tranon'ity fanahy any Kalifornia ity. Mitaky menaka manitra manitra izy. Ireo izay tao amin'ny toeram-pivarotana dia nahita ny fiovan'ny fanehoan-keviny indraindray, ary na dia ny fisehoana marina ny Reny Misaotra aza. Mpisoronabe sy eveka rehetra aza no efa ato an-trano, ary koa i Mark Mallett, mpandray anjara amin'ny CTTK anay.
Posted in Fanahy any Kalifornia, Fr. Stefano Gobbi, Messages, Ny fotoan'ny fahoriana.
← Papa Francis - Aza…
Simona - Manangona ny tafiko aho →